ठमेलका रात्रीकालिन व्यवसायीको सरकारलाई प्रश्न ! के कोरोना रातिमा मात्र लाग्छ र ?
ठमेलका रात्रीकालिन व्यवसायीले कोरोनका कारण बन्द रहेका धेरै क्षेत्र खोलिएको तर आफूहरु अझै पनि बन्दाबन्दि मै बस्न परेको कुरालाई लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिपाऊँ भन्दै नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण गराइएका छन् ।
Photo By Abhishek Maharjan
Posted By Uttam Rimal
दिउँसो लगभग सबैजसो क्षेत्रमा सुरक्षा सावधानी अपनाएर काम हुन्छ । राजधानी घुम्दा लाग्छ यता त कोरोना भन्ने केही नै छैन । तर राति हामी राजधानीको पर्यटकिय मुटु ठमेलमा जाँदा न दिउँसो देखेको जस्तो हुन्छ न त पहिले पहिलेको जस्तो नै !!
विभिन्न चरणमा आफ्नो व्यवसाय पुन सञ्चालन गरी व्यवसाय बचाउन र कर्मचारीलाई बिस्थापित हुन बाट जोगाउनको लागि व्यवसायीले आवाज उठाइरहेका भए पनि कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन ।
यसपटक एकपटक फेरि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी ब्यवसाय बचाउन र कर्मचारीलाई बिस्थापित हुन बाट जोगाउनको पाउँ भन्दै स्वतस्फुर्त रुपमा ठमेलका रात्रीकालिन व्यवसायीले मौन विरोध गरेका छन् । उनीहरूले ठमेलको त्रीवेणी मार्गमा प्ले कार्ड बोकेर आज दिउसो ३:३० बाट प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
रोग भन्दा भोक ठूलो , गरि खान देऊ सरकार , ब्यबसाय खोलौँ, मजदुर बचाऊ , पहिलाकै अवस्थामा ब्यबसाय खोल्न देऊ , कोरोना रातिमा मात्र लाग्छ र सरकार ? जस्ता प्ले कार्ड सहितको यस मौन विरोध कार्यक्रमलाई रात्रीकालिन ब्यवसायी उप-समिती ठमेलले आयोजना गरेको हो ।
Nepal Reports - News Portal from Nepal, Nepal Business news, Nepal Tourism news, Nepali bank news, IPO news, entertainment news, Nepal sports news
ठमेलका रात्रीकालिन व्यवसायीको सरकारलाई प्रश्न...
ए हजुर पास बोक्नु भा' छ कि छैन?
फोटोफिचर : केल्सनको लेन्सबाट काठमाडौं निषेधाज्...